March 2020 – Page2– Mawlamyine Daily
မော်လမြိုင်၊ ၃၁ မတ် ၂၀၂၀ အခုမှသာ ရေးပါတယ်။ ရှာမရကြဘူးဆိုလို့သာ။ စိတ်ချရတဲ့ဆေးဆိုင်တွေကရောင်းတဲ့ ဟင်းဆင်နီတိုက်ဇာလောက်တော့ ပိုးတွေကင်းစေမယ်လို့ အာမမခံပါ။ ဘယ်အရာမဆို လေ့လာဆန်းစစ်မှုလုပ်ပြီးမှာ ထိရောက်တယ် မထိရောက်ဘူး ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဟင်းဆင်နီတိုက်ဇာအစစ်က COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် ကောင်းပါတယ်။ သူ့ထက်ပိုကောင်းတာက လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ ရေသုံးပြီး ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရက်ပျံသုံးရမလား မေးကြတယ်။ အရက်ပျံဆိုတာ isopropyl rubbing alcohol USP ခေါ်တယ်။ 70% alcohol by volume (≈ 127º alcohol proof) of pure isopropyl alcohol ပါတာကို ခေါ်ပါတယ်။ Alcohol-based hand sanitizer ဟင်းဆင်နီတိုက်ဇာအစစ်ထဲမှာ အနည်းဆုံး 60% alcohol … Continue reading Make Your Own Hand Sanitizer လက်ဖြစ် ဟင်းဆင်နီတိုက်ဇာ →
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, ဆောင်းပါး	Leaveacomment March 31, 2020 1 Minute
မတ်လ ၃၀ရက်နေ့ မြန်မာကျပ်ငွေကြေးလဲလှယ် ဈေးနှုန်းများ
Mawlamyine Daily	စီးပွားရေး, မြန်မာကျပ်နှင့် နိုင်ငံခြားငွေကြေး လဲလှယ်ဈေးနှုန်းများ	Leaveacomment March 30, 2020 1 Minute
Coronavirus ကပ်ရောဂါကြောင့် နိုင်ငံစီးပွားပျက်ကပ်အပေါ်ပူပန်မှုတွေများပြီး ဂျာမဏီနိုင်ငံက ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်
မော်လမြိုင်၊ ၃၀ မတ် ၂၀၂၀ ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဟက်ဆာပြည်နယ်က ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Mr. Thomas Schaefer ဟာ Coronavirus ကပ်ရောဂါကြောင့် နိုင်ငံစီးပွားပျက်ကပ်အပေါ်ပူပန်မှုတွေများပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားတယ်လို့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Volker Bouffier က မတ်လ၂၉ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ အသက် ၅၄နှစ်အရွယ် ဝန်ကြီး Mr. Schaefer ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ရထားသံလမ်းအနီးမှာ စနေနေ့က တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မှုခင်းအရာရှိရဲ့ စစ်ဆေးချက်အရ သူဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ အလွန်အံ့သြသွားတယ်။ မယုံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရသလို အရမ်းလဲ ဝမ်နည်းမိပါတယ်” လို့ ဝန်ကြီးချုပ် Bouffier ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဟက်ဆာပြည်နယ်ဟာ ဂျာမဏီနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးမြို့တော် ဖရန့်ဖတ်မြို့တည်ရှိရာ … Continue reading Coronavirus ကပ်ရောဂါကြောင့် နိုင်ငံစီးပွားပျက်ကပ်အပေါ်ပူပန်မှုတွေများပြီး ဂျာမဏီနိုင်ငံက ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင် →
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, စီးပွားရေး, သတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း	Leaveacomment March 30, 2020 1 Minute
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်းတွေရယူနိုင်မယ့် Viber Group တခု အစိုးရဖွင့်
မော်လမြိုင်၊ ၃၀ မတ် ၂၀၂၀ Covid-19 နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တရားဝင် အရေးကြီးသတင်းနဲ့ အချက်အလက်တွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ရရှိနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရုံး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန နဲ့ အခြားဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးမယ့် Covid-19 INFO Myanmar Community Viber Group တခုကို အစိုးရက ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကို တနေရာတည်းမှာ ဖတ်ရှု သိရှိနိုင်ဖို့ အောက်ပါ Link မှာ Join နိုင်ပါတယ်လို့ သမ္မတရုံးရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ ဦးဇော်ဌေးက သူ့ရဲ့ လူမှု ကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ https://vb.me/covid19infomyanmar_1 Mawlamyine Daily
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, သတင်း	Leaveacomment March 30, 2020 1 Minute
Coronavirus လူနာတွေမှာ အမျိုးသားတွေ သေဆုံးနှုန်းမြင့်မားနေတာ ဘာကြောင့်လဲ?
မော်လမြိုင်၊ ၃၀ မတ် ၂၀၂၀ Covid-19 ရောဂါဟာ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေနဲ့ ရောဂါအခံရှိပြီးသာ လူတွေကို ပိုပြီး ကူးစက်နိုင်ခြေများပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမျိုးသမီးတွေမှာထက် အမျိုးသားတွေမှာ ကူးစက်မှု ပိုများပြီး သေဆုံးနှုန်းကလဲ အမျိုးသားတွေမှာ များတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေက ဆိုပါတယ်။ တရုတ်ပြည်က လေ့လာမှုတွေအရ အမျိုးသားတွေမှာ သေဆုံးနှုန်း ၂.၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာ ၁.၇ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံအပြင် ပြင်သစ်၊ ဂျာမဏီ၊ အီရန်၊ အီတလီ၊ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ စပိန်နိုင်ငံတွေမှာလဲ အမျိုးသားသေဆုံးနှုန်းက အမျိုးသမီး သေဆုံးနှုန်းထက်များခဲ့ပါတယ်။ အီတလီမှာဆိုရင် အမျိုးသားသေဆုံးနှုန်းက ၇၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိပြီး စပိန်မှာတော့ အမျိုးသားသေဆုံးနှုန်းက အမျိုးသမီးသေဆုံးနှုန်းထက် နှစ်ဆ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆို အမျိုးသားတွေမှာ သေဆုံးနှုန်း ဘာလို့မြင့်မားနေရတာပါလဲ? … Continue reading Coronavirus လူနာတွေမှာ အမျိုးသားတွေ သေဆုံးနှုန်းမြင့်မားနေတာ ဘာကြောင့်လဲ? →
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, သတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း	Leaveacomment March 30, 2020 1 Minute
မျောလမွိုငျ၊ ၃၀ မတ် ၂၀၂၀ ကာတှနျး - သာဒိုး
Mawlamyine Daily	ကာတွန်း, အနုပညာ, Lifestyle	Leaveacomment March 30, 2020 1 Minute
မတ်လ ၃၀ရကျနေ့ ရှဈေေးနှုနျး
Mawlamyine Daily	စီးပွားရေး, ရွှေဈေး	Leaveacomment March 30, 2020 1 Minute
မတ်လ ၃၀ရကျနေ့ စကျသုံးဆီစြေးနှုနျးမြား
Mawlamyine Daily	စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း, စီးပွားရေး	Leaveacomment March 30, 2020 1 Minute
မတ်လ ၃၀ရကျနေ့ မိုးလဝေသခနျ့မှနျးခကျြ
မျောလမွိုငျ၊ ၃၀ မတ် ၂၀၂၀ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောအ‌ခွအေနေ။ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောအလယျပိုငျးတှငျ တိမျအနညျးငယျ ဖွဈထှနျးနပွေီး၊ ကပ်ပလီပငျလယျပွငျနှငျ့ ကနျြဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတို့တှငျ တိမျအသငျ့အတငျ့ ဖွဈထှနျးနပေါသညျ။ ယနညေ့နအေထိခနျ့မှနျးခကျြ။ စဈကိုငျးဒသေကွီးအထကျပိုငျး၊ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ ကခငျြပွညျနယျ၊ ရှမျးပွညျနယျ(မွောကျပိုငျး)၊ ခငျြးပွညျနယျ၊ ရခိုငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျတို့တှငျ တိမျအသငျ့အတငျ့ ဖွဈထှနျးပွီး၊ ကနျြတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ပွညျနယျတို့တှငျ အမြားအားဖွငျ့ သာယာမညျ။ မွနျမာ့ပငျလယျပွငျ။ လှိုငျးအနညျးငယျမှ အသငျ့အတငျ့ရှိမညျ။ လှိုငျးအမွငျ့မှာ မွနျမာ့ကမျးရိုးတနျးတဈလြှောကျနှငျ့ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျတို့တှငျ (၃)ပမှေ (၆)ပခေနျ့ ရှိနိုငျပါသညျ။ နောကျ(၂)ရကျအတှကျခနျ့မှနျးခကျြ။ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ ကယားပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျတို့တှငျ နအေ့ပူခြိနျမြား အနညျးငယျ တိုးလာနိုငျပါသညျ။ နပွေညျတျောနှငျ့အနီးတဈဝိုကျအတှကျယနညေ့နအေထိခနျ့မှနျးခကျြ။ အမြားအားဖွငျ့ သာယာမညျ။ ရနျကုနျမွို့နှငျ့အနီးတဈဝိုကျအတှကျယနညေ့နအေထိခနျ့မှနျးခကျြ။ တိမျအသငျ့အတငျ့ ဖွဈထှနျးမညျ။ မန်တလေးမွို့နှငျ့အနီးတဈဝိုကျအတှကျယနညေ့နအေထိခနျ့မှနျးခကျြ။ အမြားအားဖွငျ့ … Continue reading မတ်လ ၃၀ရကျနေ့ မိုးလဝေသခနျ့မှနျးခကျြ →
Mawlamyine Daily	မိုးလေ၀သ	Leaveacomment March 30, 2020 1 Minute